Isilimela 9, 2018 admin
abasemagunyeni Korean abafumani umsebenzi mthethweni kuphando Bithumb
Uphando exchange inkulu eMzantsi Korea, Bithumb ngoogunyaziwe ezininzi eMzantsi Korean ibonisa ukuba kukho ububi egameni lenkampani, nangona umthetho werhafu enkulu.
Ngoku Bithumb sele bill irhafu 30 billion iphumelele ukuba ahlawule, okumane kalukhuni $28 million.
A bill werhafu omkhulu akumangalisi kakhulu, njengoko njengeqonga ibiza imali avareji 0.3% ku kalukhuni $250 million kweentengiselwano ngosuku.
Ukuba Bithumb uwunike oku kakhulu Programmes, oko bekuya kuthetha ukuba inkampani eyenza nani esinobubanzi $750,000 ngosuku, okumane phantse $274 million ngonyaka ngamnye.
tags: bitcoin, iindaba
Ontology uqala Ecosystem namafutha - Ontology Olympus namafutha OOA
Ontology, a new high-performance public multi-chain project and a distributed trust collaboration platform, wamemezela Ontology Olympus namafutha (OOA).
Le program limema ubuchwepheshe kunye nemveliso iingcali kuwo onke amasimi ukuya banokusebenzisana xa ushishino nokwakha ezintsha izicelo zoshishino asasazwa ngokusekelwe elandelayo-isizukulwana izibonelelo chain zoluntu Ontology ukuba ndakhele open-umthombo, ingqondo evulekile, neziphathelene zahanjiswa eziphilayo trust.
Inkqubo Ontology Olympus namafutha liya kubonelela ngokupheleleyo technical, zokumaketha, mali, italente, kunye esemthethweni inkxaso ukuthotyelwa. I Ontology Foundation iza imali malunga 1.5 billion iUSD worth of tokens, zonke eziya kusetyenziswa ukuxhasa uphuhliso elizayo zokuqala ezikhoyo kunye neekomiti ezikhethiweyo.
Norwegian CEO Air ukuba asungule exchange crypto
Billionaire Norwegian Air CEO cena Kjos isungula lonaniselwano cryptocurrency ogama Norwegian Block Exchange, kwaye ngamazwi ezinxulumene Norwegian Air ngoku yamkela cryptocurrency ntlawulo.
ngaphambili, inkampani NBX Exchange, amvuse $250,000 ngendlela izimali ngeenxa.
I-CEO wahlabela mgama wathi: "Sikhangela izinto ekulula kwisikali… ukuba cryptocurrency ntlawulo ukhetho kwi nkampani, Siyabona ukuba kukho imfuneko yokuthenga kakhulu apho unako ukuthenga nokuthengisa cryptocurrencies. "
NBX uye izicwangciso namabhongo kunye usukelo rivaling ukutshintshiselana ezifana GDAX kunye Kraken
Ingxelo Daily Market Kraken for 08.06.2018
$88.8M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Indlela ukuqhuba ICO e Switzerland
Safunda evela ...
Isilimela 13, 2018 e 5:16 PM